IUCN World Conservation Congress: Omume Nkwado Ọhụrụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » IUCN World Conservation Congress: Omume Nkwado Ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • trending Ugbu a
Prime Minista France Macron na -ekwu okwu na mmeghe ọgbakọ IUCN
International Union for Conservation of Nature (IUCN) mechiri nnọkọ nchekwa nchekwa ụwa nke afọ anọ n'izu a-otu afọ gafere karịa ebum n'uche ya n'ihi nsogbu COVID-19.
Ọ bụ atụmatụ zuru oke ma na-arụpụta ihe maka ụbọchị itoolu nke International Union for Conservation of Nature ogbako e mere na Marseille, France.
Enwere nnọkọ 4 mere n'oge a, na -ezube ịkpali ma gbaa ume.
Mgbakọ anọ ahụ ewepụtara bụ: ọgbakọ ụmụ amaala, nzukọ ndị ntorobịa zuru ụwa ọnụ, nzukọ onye isi, na nnọkọ mmemme mpaghara.
N'ime ọgbakọ ụbọchị itoolu a, ndị otu IUCN tozuru ntuli aka 9, hoputara ndu ohuru, ma kwado mmemme IUCN na-esote maka 2021-2024, nke a ga-akpọ Ọdịdị 2030: Union in Action. N'ime oge ahụ, kwa, nnọkọ 4 dị iche iche mere - nke Nzukọ ọgbakọ ndị amaala, na Nzukọ ndị ntorobịa zuru ụwa ọnụ, na Onye isi oche Summit, na Nnọkọ mmemme mpaghara, ndị niile na -achọ ịkpali ma mee ka otu dị iche iche IUCN na -arụkọ ọrụ.
EcoGo bịara ogbako ahụ na -akwado mmegharị 3 - Motion 003 - Ịmepụta Kọmitii Mgbanwe Ihu Igwe (ma ọ bụ Iguzobe Global IUCN Climate Crisis Action Platform) sitere na Hawai'i Conservation Alliance Foundation na ụda mmiri anyị; Motion 101-Isetịpụ ebumnuche nchekwa mpaghara dabere na ihe akaebe nke ihe okike na ndị mmadụ kwesịrị ime nke ọma, nke WILD Foundation na Yellowstone kwadoro na Yukon Conservation Initiative. na Motion 130 - Ịkwado ọrụ nlegharị anya na -adigide na ichekwa ihe dị ndụ dị iche iche na nkwụsi ike nke obodo, nke WCPA (otu ọrụ n'ime IUCN) na -ahụ maka njem nlegharị anya na otu ọkachamara mpaghara na -echekwa. Ha abụọ gafere, dịka enwere ike ịhụ ya nsonaazụ votu ahụ.
Pamela na Aix en Provence
Motion 130 na-ekpuchi imepụta njem nlegharị anya dị ka isiokwu yana ijikọ ihe omume na ihe omume sitere na okike n'ime ọgbakọ ọgbakọ na ọgbakọ IUCN n'ọdịnihu, na-akpọ maka imepụta otu ndị ọrụ kọmitii lekwasịrị anya na ọrụ njem nlegharị anya na nchekwa nchekwa ihe dị iche iche na nkwụsi ike nke obodo, na-agba ume. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji tinye njem nlegharị anya na mbọ ha n'ọdịnihu. Ekelere WCPA na ndị nkwado niile maka nke a.
Motion 101 bụ ogologo oge na -eme ya, ọ gaferela ekele maka mbọ ike nke Vance Martin na ndị otu ya. Dị ka mgbanwe ihu igwe na -akpali oke mkpa maka ime ihe, ndị a bụ ụdị ntuziaka achọrọ maka ichekwa okike - isi ihe na -adị ndụ.
Jehoshua Shapiro, Jessica Hughes, na Pamela Lanier na nri abalị CEC
Motion 003 nwere arụmụka dị ukwuu. Ndị na -eme atụmatụ chọrọ ka e mepụta Kọmitii Mgbanwe Ihu Igwe, mana na ntụzigharị nke òtù nyocha IUCN, a gbanwere asụsụ ka ọ nwee ndị ọrụ ọrụ, karịa kọmpụta mepụtara. Gụọ nzaghachi "Olu anyị na -erikpu" maka mgbanwe ahụ Ebe a. na asụsụ gbanwere n'okpuru ntụzịaka ọzọ ka “I guzobe Platform Action Nsogbu Ihu Igwe IUCN zuru ụwa ọnụ” ma ọ bụ imepụta kọmitii. Mmegharị ahụ gafere na arụmụka nke asatọ na nke ikpeazụ na ntuli aka nke ọgbakọ ahụ, n'agbanyeghị ụdị a ga -eme ka amabeghị.
IUCN kwenyekwara na a ngosipụta ọhụrụ maka afọ anọ sochirinụ na-elekwasị anya na mgbake COVID-19 na ịkwụsị mfu ihe dị ndụ.